बिहान मुख धुँदा साबुनको सट्टामा प्रयोग गर्नुहोस् यी चिज, मिल्छ प्राकृतिक सुन्दरता ! – Online Khabar 24
अधिकांश मानिसले आफ्नो अनुहार सफा गर्नका लागि साबुन या फेसवासको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
Prevघरमा अचानक बढ्न थालेको खर्चले हालत खराब भयो ? तुरुन्त ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा !
nextयस दिशामा नराख्नुहोस् कुचो, निम्त्याउन सक्छ घरमा बर्बादी !